Kudiwa kwezvikamu zveiyo iPhone 8 kunokonzera kushomeka kune vamwe vagadziri | IPhone nhau
Iko kudiwa kwezvinhu zveiyo nyowani iPhone modhi yakakwira kwazvo zvekuti kuri kuisa panjodzi kupihwa kune vamwe vagadziri, sekureva kwakawanda akasarudzika midhiya. Mishumo inoyambira kuti kushomeka kwe NAND uye DRAM machipisi zvinokonzerwa nekutenga kukuru neApple uye musimboti iyi nhanho inoita kunge isingashande kudzivirira kushaikwa kunosuruvarisa kwechigadzirwa chemiti chakangotangwa pamusika mushure mekuburitswa munaGunyana. Ichi chinhu chisinga shamise sezvo zvagara zvichiitika neshanduro dzakasiyana dze iPhone, asi mune ino nyaya kungave kushomeka kukuru kunyangwe Apple ichiedza kudzivirira izvi kuti zviitike.
Sekureva kweReuters, vamwe vagadziri vakaita seLG vari kuisa pamberi maodha ezvinhu izvi zvinonyeverwa nevanozvigovera ivo pachavo, vamwe vakaita saNintendo vari kutotambura nekushomeka kweNAND machipisi eSwift console yavo uye pakupedzisira dambudziko rakagovaniswa zvakaenzana nevose kubvira musika unozoonawo kushomeka kwechigadzirwa kunze kweApple. Chidimbu chemachipisi neApple ndechimwe chepamusoro-soro nguva dzese, sekudiwa kwezviratidziro kubva kuSamsung Ratidza, saka tinoda kutenda izvozvo muchina uri kumanikidzwa kuve nechigadzirwa kuchengetedza zvirinani pakutanga kwekutengesa kweiyo nyowani iPhone 8.
Gore rino kushaikwa kwesitoko kuri kutambura zvakanyanya nevashandisi vanoda kutenga AirPod uye chimwe chinhu chakafanana chinogona kuitika neiyo iPhone 8 kunyangwe Apple iri kusiya mamwe mabhureki asina zvemukati zvemukati. Chero zvazvingaitika, isu takatoyambirwa kwenguva yakareba kuti izvi zvichaitika uye hazvifanire kutishamisa kana zvichizopedzisira zvaitika, isuwo tinofanirwa kuyeuka kuti Spain ndiyo imwe yenyika dzinowanzo kuve mune yechipiri batch yekutangisa saka kusvikira mwedzi waGumiguru tinogona kunge tisina mukana wekutenga idzi nyowani iPhone 8, asi ichaonekwa kana nguva yasvika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Kudiwa kwezvikamu zveiyo iPhone 8 kunokonzera kushomeka kune vamwe vagadziri